Ahoana no ahafahako manatsara ny SEO amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny rindran-damosina redirect?
Eny, azo atao ny manolotra fanatsarana tsara ho an'ny ezaka ankapobeny ao amin'ny SEO - amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny rohy efa misy anao ary ny fampiharana amin'ny redirect backlinks. Ahoana? Eny, andeha hojerentsika.
Antony telo antony hamerenana ny rohy voapetraka:
1. Afaka mifehy tanteraka ny fizotran'ny fampiharana azy ianao (tsy toy ny liona ny anjara asa hafa, ohatra toy ny fanentanana votoaty);
2. Ny fikojakojana rohy tapaka, tsy vitan'ny hoe manatsara ny fikarohanao ny karoka fotsiny ianao fa mahazo tombony maro hafa miafina (e. h. , fanandramana mpampiasa kokoa);
3. Hanao ny ankamaroan'ny ezaka efa nataonao ianao.
Raha heverina fa ny dingana iray manontolo atao amin'ny maridrefy dia mety ho mifanohitra amin'ny fomba fiteniny ary mety ho sarotra ny hahomby araka ny tokony ho izy, eto dia misy ny fepetra fohy mba hikarakarana azy io: 1)
Fantaro ireo rohy rehetra nopotehinao tao amin'ny tranokalanao na ny blôginao.
Mamaky azy ireo amin'ny loha-hevitra manodina lehibe.
Ampiasao ny fananganana rohy an-tserasera sy fitaovana mpanampy mba hanoratra fanovàna.
Fenoy ny asanao amin'ny alàlan'ny rindran-drakitra ary ahitsio amin'ny ankapobeny.
Mamaritra ny rohy mandika
Alefaso indray izany indray - hitady ahafahana manodina rindran-damina mitondra mankany amin'ny pejin'ny tranonkala na blôgy. Amin'izany fomba izany, mila mila tatitra manokana momba azy ireo ianao - amin'ny fampiasana ny Google Search Console, na fitaovana an-tserasera an-tserasera mba hahazoana tsaratsara kokoa sy mazava kokoa, toy ny Open Site Explorer (Moz), Semalt Analyzer (Semalt), na Miondrika ny SEO. Na izany na tsy izany, tsy misy afa-tsy ny manapa-kevitra hoe inona no tokony hofidina amin'io asa io.
Manao izany, tadidio fa tsy maintsy manamboatra ireo rohy ao anaty tranonkalanao ao amin'ny tranokalanao na blôginao ianao, satria mety hisy URL marobe izay nifindra toerana nandritra ny taona faramparany. Noho izany, ny zavatra rehetra ilainao dia ny manomana asa maro sy asa an-tery mahazatra - amin'ny fampiasana ny Google Search Console mba ahafahana manova backlinks amin'ny tanana. htaccess na special plugin raha mampiasa WordPress ianao. Na azonao atao koa ny manitsy haingana ireo rohy mila fika - amin'ny fampiasana iray amin'ireo mpanampy an-tserasera taloha.
URL tsinjara amin'ny alàlan'ny rindrankajy
Ho mpampiasa WordPress aho, noheveriko fa hamantatra ny modely marin'ny URL taloha (ohatra, tonga toy ny domain + taona + volana +. html), ary ny endrika URL vaovao (e. h. , anarana nomerao + anaran'olona). Ny fampidirana amin'ny teny Anglisy tsotra, ianao dia mila manoratra torolàlana manokana momba ny bug crawling Google milaza azy ireo momba ireo na ireo fanovana hafa maharitra - na ao amin'ny URL mihitsy, sy ny pejin'ny HTML HTML (raha tsy izany dia miasa amin'ny redirect 301).
Fanavaozana ny sora-baventy
Raha ny amiko, dia nampiasa ny Permalink Helper Tools aho mba hiara-miasa amin'ireo adiresy code. Ny zava-drehetra dia tokony hanazava ny tena ao an-tsainao, saingy tadidio fa manana ny loharano URL an'ny URL toy ny URL izay manomboka amin'ny sehatra misy anao, manaraka ny isa sy ny slash, mba hifarana amin'ny vanim-potoana miovaova avy amin'ny WordPress, ary mariho amin'ny HTML izay misintaka ny vanim-potoana. Tadidio fa tokony atao foana ny fari-dalany ary mifarana amin'ny slash.
Backlinks amin'ny redirection ary ny fijerena azy ireo
Mba hamenoana ny fepetra, esory fotsiny ny anao. htaccess rakitra miaraka amin'ny code amin'ny alalan'ny fifandraisana FTP miaraka amin'ny mpizara. Mitandrema - ataovy azo antoka ny zava-drehetra. Midika izany fa ny fitantanana ny fidirana amin'ny tranokalanao na blôgy anao. Htaccess, raha misy zavatra tsy mety dia azonao atao koa ny mamaky ny zava-drehetra - na dia amin'ny fehezan-teny madinika aza. Amin'izany fomba izany, ny ilainao rehetra dia ny hampisaraka ny loharano misy anao amin'ny loharano sy ny target, manandrama fomba fijery fanaraha-maso miaraka amin'ny fitaovana fitifirana - ary vita ianao!
Soso-kevitra: Azo atao koa ny mampihatra ireo rohy anatiny ao anatiny. Mazava ho azy, raha ny marina, tsy tokony handalo amin'ny alàlan'ny fanodikodinana izy ireo, saingy indrisy fa tsy azo atao foana izany. Tadidio fa ny fanovana indray dia tsara kokoa noho ny 404 Source .